Yonke imigilingwane ye-iPhone X yokuyisebenzisa ngokugcwele | Izindaba ze-IPhone
I-iPhone X ibe ushintsho olukhulu selokhu i-Apple yethule imodeli yokuqala ye-smartphone edume kakhulu emhlabeni, eminyakeni engaphezu kweyishumi edlule. Akukona kuphela ukuthi lokhu kungumklamo omusha ongenasici, kepha i-Apple isuse inkinobho yasekhaya, futhi lokhu ngaphezu koshintsho lobuhle kusho ukuthi indlela esiphatha ngayo idivayisi nayo iyashintsha.
Ukuvala izinhlelo zokusebenza, ukuvula imisebenzi eminingi, ukufinyeleleka, ukushintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza, isikhungo sokulawula, isikhungo sezaziso noma ukucisha idivayisi yilezi imisebenzi eyenziwa ngokungafani ku-iPhone X kunendlela esiyijwayele kusukela kwavela i-iPhone yokuqala. Kule vidiyo nakwindatshana sikutshela lonke ushintsho ukuze wazi ukuthi ungaphatha kanjani i-iPhone X kusukela ngosuku lokuqala.
1 Yenza imisebenzi eminingi futhi ushintshe izinhlelo zokusebenza ngokuthinta komzimba
2 Ukuvuswa kwesikrini esisodwa
3 Isikhungo sokulawula, amawijethi nesikhungo sezaziso
4 Ukucisha, isithombe-skrini, i-Apple Pay neSiri
Yenza imisebenzi eminingi futhi ushintshe izinhlelo zokusebenza ngokuthinta komzimba
Akusekho inkinobho yasekhaya, akusekho ukwesaba okunonya kwabanye abasebenzisi abasebenzisa inkinobho ebonakalayo esikrinini kusukela ngosuku lokuqala ukuze inkinobho ebonakalayo ye-iPhone ingaphuli. Ekugcineni, ngemuva kweminyaka sifuna izicelo eCydia ngokusebenzisa i-ailbreak, singasebenzisa i-iPhone yethu ngokuphelele ngokuthinta. Ukuvala uhlelo lokusebenza, ukuvula imisebenzi eminingi nokushintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza kuyashesha futhi kube lula ngenxa yokuthinta:
Vala izinhlelo zokusebenza ngokuswayiphela phezulu usuka ezansi kwesikrini
Vula ukwenza okuningi ngesenzo esifanayo kodwa ubambe ekugcineni ekugcineni maphakathi kwesikrini
Shintsha phakathi kwezinhlelo ngokuslayida ezansi kwesikrini, ukusuka kwesobunxele uye kwesokudla.
Kukhona esinye isenzo i-Apple engasitsheli ngaso, kepha lokho kusivumela ukuthi sivule imisebenzi eminingi ngokushesha ukwedlula isenzo esisemthethweni, futhi lokho ngokuslayida kusuka ekhoneni elingezansi kwesobunxele kuye ekhoneni eliphezulu kwesokudla, ngokulandelana. Ngalokhu sizovula imisebenzi eminingi cishe ngaso leso sikhathi, isenzo sokuthi uma usujwayele sikhululeke kakhulu kunokuhlehlisa uye phakathi kwesikrini bese ubamba umzuzwana.
Mayelana nokushintshwa kwezicelo, isenzo sokushibilika emaphethelweni ezansi kwesikrini ukusuka kwesobunxele kuye kwesokudla sikudlulisela kuhlelo obukade ulisebenzisa phambilini, futhi uma uphinda udlula kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ngokulandelana kwazo, okwakamuva kakhulu ngaphambili. Uma kanye kuhlelo lokusebenza wenza isenzo esiphambene, kusuka kwesokudla kuye kwesobunxele, uzobuyela kwesedlule, njalonjalo, kuze kube ngumzuzu lapho usebenzisa uhlelo lokusebenza. Lapho isicelo sesivele sisetshenziselwe okuthile, siba sesokuqala ngokulandelana kwezikhathi futhi isenzo esisuka kwesokudla siye kwesobunxele asisasebenzi, uze uphinde wenze lo msebenzi.
Ukuvuswa kwesikrini esisodwa
Izizukulwane ezimbalwa, i-iPhone isebenze isikrini sayo lapho uyihambisa (kusuka ku-iPhone 6s kuye phambili). Uma une-iPhone yakho etafuleni bese uyayikhetha ukuze uyibuke, awudingi ukwenza lutho ukwenza isikrini sivuleke. Kepha manje i-iPhone X ikuvumela futhi ukuthi wenze kusebenze isikrini ngokusithinta, ngokuthepha okuncane kuso.. Ngaphezu kwalokho, inkinobho eseceleni nayo izovula isikrini uma siyicindezela.
Sisesikrinini sokukhiya ngezinqamuleli ezimbili ezintsha: ikhamera ne-flashlight. Ikhamera ibikade nathi isikhashana futhi isenzo sokuswayipha ukusuka kwesokudla uye kwesobunxele sivule ngqo uhlelo lokusebenza ukuthatha izithombe noma amavidiyo, kepha manje sinayo le ndlela entsha. Zombili izinkinobho, zombili ikhamera ne-flashlight, zenziwe zasebenza nge-3D TouchingLokho, hhayi ngokubathinta kuphela kepha ngokucindezela kanzima esikrinini. Kunethezekile ngempela ukuthi le misebenzi emibili iyatholakala kusuka kusikrini sokukhiya futhi akudingeki nokuthi ivule isikhungo sokulawula ukuyivula.
Isikhungo sokulawula, amawijethi nesikhungo sezaziso
Lezi zinto ezintathu zakudala ze-iOS nazo ziguqulwe ngandlela thile nge-iPhone X entsha. Isikhungo sokulawula mhlawumbe siyinto ephazamisa kakhulu ekuqaleni kulabo abathatha i-iPhone X bengazi lutho ngezinguquko zayo, ngoba isenzo sokuyiveza ehluke kakhulu. Uma ngaphambi kokusebenzisa inketho ukuswayipha kusuka phansi kuye phezulu kunoma yisiphi isikrini se-iOS ukubonisa isikhungo sokulawula, manje kutholakala ngokuswayipha kusuka phezulu kwesikrini, ekhoneni eliphezulu kwesokudla, phansi.
Futhi kufanele kwenziwe kusuka ngakwesokudla phezulu, ngoba uma sikwenza kusuka kunoma iyiphi enye ingxenye yesikrini esingenhla, okuzovulwa kuzoba isikhungo sezaziso, esifana nesikrini sokukhiya ku-iOS 11, noma izinqamuleli zethoshi nekhamera. Ngokuzenzakalelayo isikhungo sezaziso sikhombisa kuphela izaziso zakamuva, uma sifuna ukubona ezindala kunazo zonke kuzofanele sishibhile kusuka phansi kuya phezulu ukukhonjiswa, uma kukhona. Ukwenza i-3D Touch ku- "x" esikhungweni sezaziso kuzosinika inketho yokususa zonke izaziso ngasikhathi sinye.
Aphi amawijethi? Kokubili esikrinini sokukhiya naku-springboard le nto ihlala ingashintshi, isese "ngakwesobunxele". Kusuka kudeskithophu enkulu, esikrinini sokukhiya noma esikhungweni sezaziso singavula isikrini samawijethi ngokuslayida ukusuka kwesobunxele uye kwesokudla, futhi kuso leso sikrini singakwazi ukuzihlela, sizingeze noma sizisuse ukuze zihlale ngendlela esithanda ngayo.
Ukucisha, isithombe-skrini, i-Apple Pay neSiri
Qaphela ukuthi kuso sonke lesi sikhathi asikhulumanga nganoma iyiphi inkinobho ebonakalayo, futhi yisici esiyinhloko sale iPhone X. Kepha kusekhona inkinobho esebenza imisebenzi ethile, njengeSiri, i-Apple Pay, cisha idivayisi noma uthathe isithombe-skrini: inkinobho eseceleni. Futhi ukusebenza kwayo kushintshe kakhulu kangangoba kunokudideka kakhulu ekuqaleni.
Ukukhokha nge-Apple Pay manje kufanele siqalise umsebenzi ngendlela efanayo nokuthi isetshenziswa kanjani ku-Apple Watch kwasekuqaleni: ukucindezela inkinobho eseceleni kabili. Sizokhonjwa nge-Face ID bese sikhokha esikhumulweni sokufunda ikhadi. Ngaphambi kokuya kwi-iPhone esigungwini se-Apple Pay, ivuleke ngqo, kepha ngoba bekufanele sibeke iminwe ku-Touch ID. Njengoba manje ukubonwa kobuso kucishe kube khona lapho ubheka i-iPhone, i-iOS isicela ukuthi kube yithi esivumela i-Apple Pay ukugwema izinkinga.
ISiri isasetshenziswa umyalo wezwi "Hey Siri", inqobo nje uma siyilungisa ngesikhathi sokwenza ngokwezifiso kokuqala izilungiselelo ze-iOS ku-iPhone yethu. Kepha singasebenzisa futhi inkinobho ebonakalayo ukuvula umsizi we-Apple ebonakalayo: ukubamba inkinobho eseceleni. Lokhu akusisona isenzo sokuvala idivayisi, kepha ukucela okuthile kuSiri.
Futhi ngiyicisha kanjani i-terminal? Yebo, ngokucindezela inkinobho yevolumu (noma yini) nenkinobho eseceleni ngasikhathi sinye. Isikrini esiphuthumayo se-iOS sizovuleka ngenketho yokushaya ucingo oluphuthumayo noma ukucisha i-iPhone. Khumbula ukuthi uma lesi sikrini sibonakala i-Face ID sizokhutshazwa uze ufake ikhodi yakho yokuvula futhi.
Ekugcineni, isithombe-skrini siyashintsha ne-iPhone X, futhi manje senziwa ngokucindezela inkinobho eseceleni nenkinobho yevolumu phezulu. Njengoba sekwenzekile selokhu kwethulwe i-iOS 11, singakwazi ukuhlela leso skrini, ukunqampuna, engeza izichasiselo, njll. bese sabelana ngayo lapho sifuna khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Yonke imigilingwane ye-iPhone X yokuthola okuningi kuyo
Ungavula imisebenzi eminingi ngokuslayida usuka endaweni ephakathi nendawo ngaphandle kokubamba maphakathi nomzuzwana.
Imane islayida futhi lapho ufika esikhungweni yima bese uyadedela. Ngokushesha ivula imisebenzi eminingi.
Umehluko ngokuya epuletini ngukuthi uma uya epuletini ushibilika ngaphandle kokuma. Uma ithola ukuthi umisa ngisho nokweshumi komzuzwana, bese uyakudedela, kuvulwa imisebenzi eminingi.
Iqiniso lokulinda odumile wesibili olishoyo, kungenxa yokuthi ukugqwayiza okuthatha isikhathi ukuvela kwezinye "izincwadi" zezicelo ngakwesobunxele. Kepha akudingeki ukuthi ulinde ukuvela kwe-animation, izame kusuka enkabeni phezulu, ume bese ukhipha ngasikhathi sinye.
Ezio Auditore kusho
Ngingasitholaphi isithombe sangemuva sokuvula?
Phendula ku-Ezio Auditore
Futhi ngaphambi kokuthi ngibe kusikrini 5 se-iPhone yakho futhi ufuna ukubuyela esikrinini sokuqala, ukucindezela inkinobho yasekhaya bekuzokusa esikrinini sokuqala, nge-iPhone X lokhu akukho, akunjalo?
Gcina ibhethri ku-iPhone X yakho ngokwenza kungasebenzi 'Cindezela ukuze wenze kusebenze'